.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song လုပ်ဖို့ Effect ဆိုဒ်သစ်တစ်ခု တွေ့ပြီ
Flash Song လုပ်ဖို့ Effect ဆိုဒ်သစ်တစ်ခု တွေ့ပြီ
ကဲ ဒီနေ့တော့ Flash Song လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သတင်းကောင်းပဲပေါ့နော်..
ကျွန်တော်မနေ့က Flash Song Album လေးမှာ ထည့်ဖို့ မောက်ပုံလေး လိုချင်တာနဲ့
Google မှာ ရှာရင်းကနေ အမှတ်မထင် သွားတွေ့တာပါ။ အရင်က ဒီလို Effect လေးတွေသုံးပြီး
Flash Song လုပ်ထားတာ တွေ့မိပေမယ့် သူတို့ကလည်း ဝါသနာရှင် အချင်းချင်း ပြန်ပြီး
မျှဝေပေးတာ မတွေ့ပါဘူး ။ တစ်ချို့ကျတော့ တင်တော့ တင်ပေးတယ်။ မူရင်း ဆိုဒ်လင့်ကိုတော့
ချန်ထားပါတယ်။ ခု ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုဒ်ကတော့ အရင်ဆိုဒ်တွေလို Free ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့က ရောင်းစားတာပါ။ $ 1.00 , $ 2.00 , $ 5.00 , $ 8.00 အထိတောင် တွေ့ပါတယ်။
နမူနာ Flash ဖိုင်ကို ပြထာားပါတယ်။ ကြိုက်ရင် ဝယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝယ်ပါဘူး။
Flash ဖိုင်ကြီးတောင် မြင်နေမှပဲ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ အကြံအဖန်ထုတ်ပြီး ဆွဲပါတယ် :P
ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး Flash တစ်ခုပါ။ စိတ်တွေ ရှုပ်ပြီး ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်
အဲဒီ ရှုခင်းလေး ကြည့်လိုက်ရင် အမောပြေပါတယ်။ အင်မတန် သာယာ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ရောင်းဈေးကတော့ $5.00 ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေကို စေတနာလေးနဲ့ပေါ့
Free ပေးမှာပါ :P ဒီလင့်လေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ အဲဒါ ကျွန်တာ် အဲဒီဆိုဒ်က ယူလာခဲ့တာပါပဲ။
အဲဒီ Flash စာမျက်နှာလင့်လေးကိုတော့ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
http://www.buystockflash.com/Flash.html မူရင်း ဆိုဒ်လင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Flash နဲ့ ပက်သက်တာတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ သေချာရှာကြည့်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆိုဒ်လင့်ပေးထားပြီးပြီပဲ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပိုက်စိပ် တိုက်သာ ရှာပေတော့။
ဒေါင်းနည်းကတော့ Flash Song ဒေါင်းနည်း အတိုင်းပါပဲ။ Tools>>Page Info>>Media ကိုနှိပ်ပြီးတော့
အဲဒီလင့်မျိုးကို ရှာပါ။ စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ Flash ဖိုင် တစ်ခုသာ တင်ထားတာမလို့ ကိုယ်လိုချင်တာကို
တန်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သေချာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး ဖွင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ..။
သူများစီးပွားရေး လုပ်နေတာကို နှောက်ယှက်သလိုများ ဖြစ်သွားပြီလား မသိဘူး။ ဒါပဲနော်......
Labels: Flash, အသိပေးခြင်း
mckaunglay9February 2013 at 21:10
အစ်ကို ဒေါင်းလို့ မရဘူးဗျ ကူညီပါအုံးခင်ဗျာ
Thurainlin9April 2013 at 21:54
Flash Song နဲ့ တစ်ခြား SWF ဖိုင်များအား Download ဆွဲနည်းကို အောက်ပါ လင့် ၂ ခုတွင် ရေးတင်ထားပါသည်။